Beesha Caalamka oo go’aano ka soo saartay Arrimaha doorashooyinka dalka . | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Beesha Caalamka oo go’aano ka soo saartay Arrimaha doorashooyinka dalka .
Xubnaha Beesha Caalamka oo bilaabay inay fargeliyaan Arrimaah la xiriira doorashooyinka Soomaaliya oo weli uu muran ka taagan yahay, kaddib markii musharxiiinta qaar ee Madaxweynaha Soomaaliya ay kasoo horjeesteen guddiyada doorashooyinka ay magacaawday dowladda Soomaaliya.
Xubno ka tirsan Beesha Caalamka oo uu horkacayo Wakiilka Qaramada Midoobay ee Arrimaha Soomaaliya Amb, James Swan ayaa waxaa ay kulan dhinaca Internet-ka ah la yeesheen Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kuxigeenkiisa Mahdi Maxamed Guuleed & Xubno kale oo ka tirsan Dowladda.
Kulanka ayaa waxaa looga hadlay Arrimo la xiriira doorashooyinka dalka, iyaga oo sidoo kale oo dhaweeyay safarkii la xiriira doorashooyinka socda ee uu dhawaan ku tegay Ra’iisul Wasaare Rooble Magaalada Baydhabo, isla markaana uu kula kulmay Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Dhinaca kale Xubnaha Beesha Caalamka ayaa bilaabay kulamo ay la yeelanayaan Madaxda dowlad goboleedyada, waxaana shalay Garoowe tegay wafdi uu hoggaaminayay Ku-xigeenka wakiilka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya Raisedon Zenenga, iyaga oo la kulmay Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni.
Kulanka ayaa waxaa looga wada hadlay sidii ay dalka ugu dhici laheyd doorasho heshiis lagu wada yahay, waxaana Madaxweynaha Puntland uu Xubnaha Beesha Caalamka la wadaagay sidii looga gudbi lahaa marxaladda lagu jiro , sidii loo heli lahaa Doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu kalsoonyahay, oo sharciyad wanaagsan dalka u yeelata.
Xubnaha Beesha Caalamka ayaa horay sidoo kale ula kulmay Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ee shirarka ku yeeshay Magaalada Muqdisho, waxaana dhawaan la filayaa in ay la kulmaan Madaxweynaha Soomaaliya si xal looga gaaro Arrimaha doorashooyinka.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa loogu baaqay hoggaamiyeyaasha Soomaalida ay sii wadaan wada hadalka dhexdooda ah, iyo sidoo kale in la sii xoojiyo dareen ku dhisan is afgarad, kaas oo dhowaanahan horumar sameeyey xilli diyaar-garowga doorashooyinka qaranku ay socdaan.
Maqaal horeXildhibaano ugu baaqay Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland in uu is casilo
Maqaal XigaFinalka Koobka kubadda cagta dagmooyinka gobolka banaadir oo Galabta la Ciyaari doono